ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း
Glaube an Gott ist ein Geschenk Gottes, wurzelnd in seinem fleischgewordenen Sohn und erleuchtet von seinem ewigen Wort durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in der Schrift. Glaube an Gott macht Herz und Sinn des Menschen aufnahmefähig für Gottes Gnadengeschenk, das Heil. Durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist befähigt uns der Glaube zur geistlichen Gemeinschaft und zu tätiger Treue zu Gott, unserem Vater. Jesus Christus ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens, und durch den Glauben, nicht durch Werke, erlangen wir dank der Gnade das Heil. (Epheser 2,8; တမန်တော် ၁5,9; 14,27; ရောမ ၁2,3; ယော 1,1.၅; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 3,16; ရောမ 10,17; ဟီး 11,1; ရောမ 5,1နှစ်ဆယ် 1,17; 3,21နှစ်ဆယ် 11,6; ဧဖက် 3,12; 1. ကောရိန္သု 2,5; ဟေဗြဲ ၁2,2)
ဘုရားသခင်သည်ကြီးမြတ်။ ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကြီးမားသောတန်ခိုးတော်ကို အသုံးပြု၍ မိမိ၏လူမျိုးတော်အားချစ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ကတိတော်များကိုတိုးပွားစေရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သူ၊ ချစ်ခြင်း၊
အဲဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါတို့နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်သလဲ။ ငါတို့ဘဝမှာဘာကွာခြားမှုရှိသလဲ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်တန်ခိုးနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။ ကျနော်တို့အနည်းဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်တုံ့ပြန်ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည်သူအလိုရှိသမျှကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်လူသားအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးရန်ထိုတန်ခိုးတော်ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောလက်၌ရှိသည်ကိုအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုန်ကန်မှု၊ မုန်းတီးမှုနှင့်သစ္စာဖောက်မှုအပါအဝင်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ သူသည်လုံးဝယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သူ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကိုခံထိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုများ၊ ဖျားနာခြင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းနှင့်သေဆုံးချိန်၌ပင်လျှင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေကြောင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုစိုက်ကြောင်း၊ သူသည်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိန်းချုပ်မှုကိုအမှန်ခံစားရသည်၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအတွက်မည်သည့်အခြေအနေ၊ မည်သည့်အမှားအယွင်းကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Wir brauchen niemals an Gottes Liebe für uns zweifeln. «Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren» (Römer 5,8). «Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat» (1. ဂျိုဟန် 3,16). Wir können darauf bauen, dass der Gott, der nicht einmal seinen Sohn schonte, uns durch seinen Sohn alles, was wir für das ewige Glück brauchen, geben wird.
«Gott ist treu» sagt Paulus, «der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr’s ertragen könnt» (1. ကောရိန္သု 10,13). «Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen» (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 3,3). Sogar wenn «wir untreu sind, bleibt er dennoch treu» (2. တိမောသေ 2,13). Er wird seine Meinung darüber, uns zu wollen, uns zu berufen, uns gnädig zu sein, nicht ändern. «Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheissen hat» (Hebräer 10,23).
သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနုတ်ရန်၊ ထာဝရအသက်ပေးမည်၊ ငါတို့မရှိရင်သူမရှိဘူး။ ကိုယ်တော်သည်ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သူဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်သင့်သနည်း။ ငါတို့စိုးရိမ်သလား ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ထိုက်တန်ရန်ရုန်းကန်နေရပါသလား။ ငါတို့ကိုယုံနိုင်သလော။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စွန့်ပစ်လိုက်ရင်ကျရှုံးမှာပါ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အနေဖြင့်နေသွားလျှင်ပင်ပျက်လိမ့်မည်။ တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်သည်နေထက်တန်ခိုးကြီးမားပြီးစကြာ ၀ thanာထက်စွမ်းအားကြီးမားသော၊ အချိန်နှင့်နေရာထက် ပို၍ သစ္စာရှိသော၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသည့်မေတ္တာနှင့်သစ္စာစောင့်သိမှုပြည့်ဝသောဘုရားသခင်၌တည်သည်။ ငါတို့ကိုရွေးနှုတ်သောသခင်ယေရှု၌၎င်း၊
ဒီတော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာလဲ၊ သူက“ မှန်သည်ကိုယုံကြည်ခြင်း” နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ အရိုးရှင်းဆုံးရှင်းပြချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုစိုက်ရန်၊ မကောင်းမှုအစားကောင်းကျိုးပြုရန်၊ ထာဝရအသက်ပေးရန်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်း၊ သူသည်ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သူအလိုရှိရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ထိုတန်ခိုးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလက်အောက်ခံခြင်းနှင့်နာခံရန်အသင့်ရှိခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျှင်၊
ယုံကြည်စိတ်ချမှုကကျွန်ုပ်တို့ပြုသည်ကိုပြသည်။ သို့သော်လုပ်ရပ်သည်ယုံကြည်မှုမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်မှုကိုမဖန်တီးပါ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်မှု၏ရလဒ်သာဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုအဓိကယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီယုံကြည်မှုအမျိုးအစားကဘယ်ကနေလာတာလဲ ဒါဟာငါတို့ကိုကိုယ်ထဲကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ခိုင်လုံသောအမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ မရနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်အငြင်းပွားမှုများ၊ ကန့်ကွက်မှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှကိုင်တွယ်ရန်အချိန်မရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမည်လော၊ နောက်ကျော burner အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ် - ငါတို့သေးသူ့ကိုမယုံကြဘူး။
Jeder Christ hat an dem einen oder anderen Punkt eine Entscheidung getroffen, Christus zu vertrauen. Für einige war es eine gut durchdachte Entscheidung. Für andere war es eine unlogische Entscheidung, die aus falschen Gründen getroffen wurde – aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir könnten niemand sonst vertrauen, nicht einmal uns selber. Auf uns allein gestellt würden wir unser Leben verpfuschen. Wir könnten auch nicht anderen menschlichen Autoritäten vertrauen. Für einige von uns war der Glaube eine Wahl, die wir aus Verzweiflung getroffen haben – wir konnten nirgendwo anders hingehen als zu Christus (Johannes 6,68) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး ယုံကြည်ချက်သည်နုသောယုံကြည်မှုဖြစ်ရန်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် - ကောင်းသောအစ၊ သို့သော်ရပ်တန့်ရန်ကောင်းသောနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားဖို့လိုသည်။ လူတစ်ယောက်ကယေရှုကိုပြောခဲ့သလိုပဲ
သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူအားယုံကြည်နိုင်စွမ်းကိုမပေးခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်နိုင်ပါ။ လူတို့သည်မိမိတို့၏အစွမ်းခွန်အားသို့မဟုတ်ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရန် (သို့) ယုံကြည်ရန်အပြစ်တရားမှယိုယွင်းလာသည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသော“ အလုပ်” တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျော်ကြားမှုမရရှိပါ။ ယုံကြည်ခြင်းသည်လက်ဆောင်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရန်၊ ထိုဆုကျေးဇူးကိုခံစားရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ရန်အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူသည်မိမိကိုယုံကြည်ရန်နှင့်သူ့အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရသောသူတစ် ဦး ရှိသည်။ ငါတို့ကိုပေးတော်မူသောယုံကြည်ခြင်းသည်ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်ရန်အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုဝယ်ယူသောကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးရှိသည်။ သူသည်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုး၊ တံဆိပ်ခတ်။ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်။
, ၀ ံဂေလိတရား၏စကားသည်သခင်ယေရှုအကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုစကားလုံးအားကျွန်ုပ်တို့ကိုထွန်းလင်းစေပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထိုစကားလုံးအားမိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ တခါတရံ၎င်းကို“ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သက်သေခံချက်” ဟုရည်ညွှန်းသော်လည်း၎င်းသည်တရားရုံးသက်သေနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။
၎င်းသည်အတွင်းဘက်ခလုတ်တစ်ခုနှင့်ပိုတူသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းကောင်းကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ခံစားရတယ် ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းများရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းဤသတင်းစကားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို၎င်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထိုအခြေခံပေါ်တွင်ချမှတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။ အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးပွားနိုင်စွမ်းကိုလည်းကိုယ်တော်ပေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်း၏သိုက်သည်ကြီးထွားသောမျိုးစေ့ဖြစ်သည်။ our ၀ ံဂေလိတရားကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသူစွမ်းအားပေးသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်သူကူညီပေးသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာလာကြသည်။ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်သည်ကို၎င်း၊
သို့သော်ခရစ်ယာန်အများစုသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တိုက်လှန်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမှုသည်အမြဲတမ်းချောမွေ့။ တည်ငြိမ်မှုမရှိ - စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အချို့သူများအတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အခြားသူများအတွက်မူဘုရားသခင်ထက်ရုပ်ပစ္စည်းများကို ပို၍ ယုံကြည်ကိုးစားရန်ကြိုးပမ်းခြင်းသည်သာယာဝပြောမှုသို့မဟုတ်ကောင်းသောအချိန်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကချမ်းသာတဲ့သူတွေထက်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတတ်တယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စမ်းသပ်မှုများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူများသည် ဘုရားသခင်မှတပါး မျှော်လင့်ချက်မရှိ၊ ဘုရားသခင်မှတပါး ရွေးချယ်စရာမရှိဟု သိကြသည်။ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ဆင်းရဲသားတွေဟာ ချမ်းသာသူတွေထက် သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ချာ့ခ်ျကို ပိုပေးတယ်လို့ ကိန်းဂဏန်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များ (မပြည့်စုံသော်လည်း) ပိုခိုင်မြဲပုံရသည်။
အရာရာတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့သွားသည့်အခါယုံကြည်မှုအကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။ လူတို့သည်သူတို့၏ဉာဏ်စွမ်းအားဖြင့်သူတို့များစွာရရှိခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရန်သွေးဆောင်ခံရသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်အားမှီခိုခြင်းအပေါ်သူတို့၏ကလေးကဲ့သို့သဘောထားကိုဆုံးရှုံးကြသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်အစားရှိသည့်အရာကိုသူတို့အားကိုးကြသည်။
ဆင်းရဲသောသူများသည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိသက်ရှိများသည်မေးခွန်းများနှင့်ဘုရားသခင်သည်မေးခွန်းအနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရန်ပိုကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိသည်။ မင်းကသူ့ကိုယုံတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာအားလုံးဟာယုံကြည်စိတ်ချထိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ငွေ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သူငယ်ချင်းများ - အားလုံးသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သူတို့ကိုမှီခိုလို့မရဘူး။
ဒါတောင်မှတစ်ခါတလေမှာသံသယတွေနဲ့ငါတို့ရုန်းကန်နေရတယ် ဘုရားသခင်ကိုပိုမိုယုံကြည်ကိုးစားရန်သင်ယူခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားခြင်းဖြစ်စဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ရှိသောရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးဘုရားသခင်အားအကောင်းဆုံးအဖြေအဖြစ်ရွေးချယ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာက Blaise Pascal ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်ဘုရားသခင်သည်အကောင်းဆုံးလောင်းနိုင်သောကြောင့်ယုံကြည်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါကမတည်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမဆုံးရှုံးပါ။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့နောက်ကိုမလိုက်ဘဲသူတည်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုံးနိမ့်စရာအကြောင်းမရှိသော်လည်းအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်သူသည်စကြဝuniverseာတွင်အလုံခြုံဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဆိုပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် ရှိနေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာခံမှုကိုအားကိုးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသော၊ စိတ်မချရသောအရာတစ်ခုခုကိုအားကိုးသည်။ ခရစ်တော်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် (ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်) နှင့်သူတစ် ဦး တည်းကိုသာပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းသောဥပဒေများပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏အခြေခံမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပဋိညာဉ်တရားသစ်များကိုပင်နာခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ခရစ်တော်သာလျှင်ယုံကြည်ထိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များနှင့်အပြစ်များကိုပိုမိုသိရှိလာလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မည်မျှဝေးကွာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့အပြင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုမသန်စွမ်းသောသူများအတွက်အသေခံရန်သူ၏သားတော်ကိုအမှန်တကယ်စေလွှတ်မည်ကိုသံသယဖြစ်စေနိုင်သည်။
မည်မျှပင်ကြီးမြတ်သည်ကိုသံသယကခရစ်တော်ကိုပိုမိုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသင့်သည်။ ငါတို့လှည့်လို့မရတဲ့တခြားနေရာမရှိဘူး။ သူ၏အပြစ်များအတွက်သူမသေဆုံးမီကျွန်ုပ်တို့မည်မျှယိုယွင်းဖောက်ပြန်ခဲ့ကြောင်းအတိအကျသိသည်ကိုသူ၏အပြောအဆိုနှင့်အပြုအမူများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမြင်လေလေ၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၌မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံရန်လိုအပ်လေဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သံသယများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတော်မူမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းသောအသီးများသောဆက်ဆံရေးရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏စကားများကိုတရားဒေသနာများနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၊ ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌လုပ်ဆောင်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသစ္စာရှိကြောင်းပြနိုင်သည်။
သူတစ်ပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်နိုင်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကလှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းတို့မှကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုချစ်မြတ်နိုးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရက်ရောစွာဆုချရန်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့ဘာလုပ်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲချစ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုရက်ရောနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာထားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ကသူပြောသလိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကသူကိုအခြားအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်ပြီးသူတောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လိုလိုလားလားရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကယ်တင်ခြင်း၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းများကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံစားရမည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်ဘုရားသခင်အား အစပြု၍ အဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။